दशैंका लागि १२ लाख यात्रु बाहिरिए, अझै १२ लाख बाहिरिने !
दशैंका लागि १२ लाख यात्रु बाहिरिए, अझै १२ लाख बाहिरिने !
काठमाडौँ - दसैँ नजिकिँदै गर्दा काठमाडौंबाट घर फर्किनेको भिड बढ्दै गएको छ । दसैँका लागि उपत्यकाबाट २५ लाख व्यक्ति बाहिरिने ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात व्यवसायीको अनुमान छ । एक हप्तायता बुधबारसम्म १२ लाख बाहिरिएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ ।
महाशाखाका अनुसार यात्रुको सुविधाका लागि ट्राफिक प्रहरीले उपत्यकाका १४ स्थानमा सहयोग कक्ष राखेको छ । कलंकी, बालाजु, नयाँ बसपार्क, चाबहिल, गौशाला, काटेश्वर, सातदोबाटो, बल्खु, सुन्धारा, पुरानो बसपार्कलगायत क्षेत्रमा सहयोग कक्ष राखिएको हो । यात्रुले जुनसुकै वेला सहयोग लिन सक्छन् । टिकट ब्ल्याक गरेको, मापसे गरेको, सिट नपाएको, यात्रु बढी हाल्ने घटनाको अनुगमन गर्न ट्राफिक प्रहरीले विशेष सुरक्षा योजनासमेत बनाएको छ । कसैले बदमासी गरेको भेटिए कारबाही हुने प्रहरीको भनाइ छ । ‘यात्रुको सहयोगका लागि १४ स्थानमा हेल्पडेक्स राखेका छौँ । डेक्समा चौबिसै घन्टा प्रहरी परिचालन हुनेछन् । यसका अतिरिक्त प्रत्येक चोक र नाकामा मापसे चेक हुन्छ । यात्रुको अवस्था जाँच गरिन्छ । टिकट पाएर सिट नपाएको अवस्था छ–छैन सोधपुछ गरिन्छ । कसैले गल्ती गरेको भेटिए कारबाही हुन्छ,’ प्रवक्ता एसपी पौडेलले भने ।
१६, १७ र १८ असोजमा दैनिक चार लाख यात्रु बाहिरिने
टिकट काउन्टरमा सबैभन्दा धेरैले १६, १७ र १८ असोजको टिकट काटिरहेका छन् । ती दिनका लागि नियमित र थप गरिएको टिकटसमेत सकिएको पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी कम्पनीका शाखा इन्चार्ज डिल्लीराज भुसालले बताए । सार्वजनिक बिदा सुरु हुने भएकाले पनि ती दिनमा दैनिक चार लाखसम्म बाहिरिने ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवसायीको अनुमान छ ।
ठूला मालवाहक साधनलाई रोक
अत्यावश्यकबाहेकका ठूला मालवाहक सवारीसाधनलाई १२ देखि १८ असोजसम्म काठमाडौं भित्रिन रोक लगाइएको छ । १० चक्के र त्यसभन्दा बढी चक्का भएका मालवाहक गाडीलाई चितवनको नारायणगढमै रोकिएको हो । अत्यावश्यक खाद्यान्न सामग्री, लत्ताकपडा, औषधि, तरकारी, मासुजन्य पदार्थलगायत तत्कालै नास भएर जाने सामग्रीको ढुवानी भने रोक लगाइएको छैन ।